वाल्मीकि आश्रमको अघोर यात्रा | चितवन पोष्ट दैनिक
वाल्मीकि आश्रमको अघोर यात्रा
२०७० कार्तिक २२, शुक्रबार ०३:०० गते
मलाई वाल्मीकि आश्रम पुग्नुथियो, जुन ठाउँ चितवनको गर्दी गाविसमा पर्छ । माडी उपत्यकाको गर्दी पुग्न जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट २५ किलोमिटर दक्षिण जानुपर्छ । तर, त्यही गाउँको भूगोलभित्र गणना हुने वाल्मीकि आश्रम जान म लागेँ पश्चिमतिर । कुरो २०६५ असोज ९ गतेको हो । बिहान झिसमिसेमै नारायणगढबाट बुटवल जाने बस चढेर यात्रा आरम्भ गरियो । ७० किलोमिटर पश्चिममा रहेको बर्दघाटमा उत्रिएपछि नवलपरासीको त्रिवेणी जाने बस समात्नुपथ्र्यो । एउटा बस भर्खरै छुटेछ । अर्को बस एक घन्टा पर्खनुप¥यो । त्यो बीचमा बर्दघाट बसपार्कको एउटा चियापसलमा नास्ता गर्नेे समय मिल्यो ।
नास्तापछि यताउता टहलिइरहेका बेला बसको तीखो हर्न कानको जाली नै फुटाउने गरी बज्न थाल्यो । हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिएर बसनजिक पुगेँ । त्रिवेणी जाने बस गुड्नै लागेको रहेछ । बसको ढोकामा उक्लिएर भित्र हेर्दा आधाजसो सिट भरिएका थिए । बर्दघाट–त्रिवेणी रूटमा चल्ने बस र त्यसताका नारायणगढ–माडी चल्ने बसहरुको हालतमा समानता रहेछ, एकदम थोत्रा । त्रिवेणी जाने बसको एउटै सिट सग्लो थिएन । मलाई त्यो कच्ची सडकको गौँडागौँडामा स्थानीय यात्रु उकाल्न र ओराल्न दर्जनौँ पटक रोकिँदै र घिस्रिँदै गन्तव्यमा पु¥याउने त्यो बसभित्र सँगै यात्रा गर्ने साथी कस्तो पर्ला भन्ने खुल्दुली थियो ।
म खासगरी चितवनको वाल्मीकि आश्रम र नवलपरासीको त्रिवेणीधामका बारेमा अधिकतम जानकारी बटुल्न जाँदै थिएँ । त्यस कारण, मलाई यात्रामा ती दुवै थलोबारे पूर्ण जानकार साथीसँग सिट साझेदारी गर्ने इच्छा थियो । बसभित्र चारैतिर नियालेपछि एउटा सिटमा एक्लै बसिरहेका एक वृद्धसँग आँखा जुध्यो । नजिकै गएर सँगै बस्ने अनुमति मागेँ । उनले खुशीसाथ मलाई स्वागत गरे । उनी पनि त्रिवेणीसम्मै जाने थाहा पाएपछि म फुरूङ्गै भएँ । किनभने, तिनी ४० वर्षदेखि त्रिवेणीमै बसोबास गरेका रैथाने थिए । त्रिवेणीधाम र वाल्मीकि आश्रमका बारेमा मलाई इतिवृत्तान्त बताउन सक्ने उनी मैले सोचेजस्तै र खोजेजस्तै सहयात्री सावित भए ।
अनुहारले ८० वर्ष नाघेजस्तो देखाए पनि उनी भर्खर ६७ टेकेका रहेछन् । आदरपूर्वक पूरा नाम–ठेगाना सोधेँ । उनी त्रिवेणी सुस्ता गाविस वडा नम्बर एक बजारटोलका बासिन्दा नलराज शर्मा रहेछन् । मैले जम्मा २८ किलोमिटरको बाटोमा पनि उनीसँग दुई घन्टाभन्दा बढी समय सहयात्रा गर्ने मौका पाएँ । समय बितेको पत्तै भएन । मेरा जिज्ञासा र उनका जवाफ नसकिँदै त्रिवेणी बजार आइपुगेछ । यात्राभरिको सूचना सत्रलाई समापन गर्दै हामी दुवै ओर्लियौँ । बसबाट उत्रिँदासम्ममा मलाई आफ्नो गन्तव्य र त्यसको पर्यटकीय, पुराता¤िवक तथा धार्मिक मह¤वबारे पूरापूर जानकारी भइसकेको थियो । त्यस्ता साथी नभेटेको भए मैले त्यति जानकारी बटुल्न त्रिवेणीमा अरु दुई घन्टा बिताउनुपथ्र्यो ।
एकै थलोमा धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पुराता¤िवक पर्यटनको स्फुरण सँगाल्न चाहनेहरुका लागि तराईको एउटा गतिलो गन्तव्य रहेछ, त्रिवेणीधाम । त्यहाँ त्यसबेला खाना र बासका लागि केही स–साना होटलका अतिरिक्त तीन लज र त्यति नै संख्यामा धर्मशालाहरु थिए । ती लज र धर्मशालाहरुमा सयदेखि डेढ सय जनासम्म पाहुना अटाउने क्षमता थियो । दुई हजारभन्दा बढी पाहुना अटाउने अर्को विशाल धर्मशालाचाहिँ पुरानो भएर पहिल्यै भासिएको रहेछ । थप पाहुनालाई स्वागत गर्न नयाँनयाँ होटल, लज र धर्मशालाहरु धमाधम बनिरहेका थिए । अहिले ती सब तयार भइसकेका होलान् ।
भारत सरकारले २०१८ सालमा बाँधेको गण्डक ब्यारेजको कारण पानी तालिएर नारायणी नदीमा विशाल सरोवर बनेपछि ब्यारेजमाथिको त्रिवेणीधाम समुद्री तटको सहरजस्तै देखिँदोरहेछ । त्यहाँका मठमन्दिरहरुमा टहलिँदा पूजापाठको दृश्य, धूपको सुवास तथा शङ्खघण्ट र उपासनाको अवाजले अद्वितीय तरङ्ग पैदा ग¥यो । नजिकैका स्नानघाटहरुको दृश्य अझ लोभलाग्दा थिए । गण्डक ब्यारेजनिर्मित नारायणी नदीको तलाउमा त्रिवेणी बजार र मठमन्दिरहरुको छाया टल्किँदा पानीमुनि अर्को सहर बसेको भान हुन्थ्यो । नदीकिनारमा जीवनले अनुपम सौन्दर्य महसुस गरिरहेका बेला आडैमा देखिने मानव शवदाह र अन्त्येष्टि–कर्मको दृश्यले घाटेवैराग र मृत्यु–स्पर्श पनि पैदा गर्दथ्यो ।
एकैछिनअघिको बसयात्रामा आफ्ना सहयात्रीबाट मैले थाहा पाएअनुसार मेला–उत्सवका बेला प्रचलित पञ्चकोसी परिक्रमा त्रिवेणीधामको विशेष पहिचान थियो । धार्मिक तीर्थालुहरुले त्यहाँको शिवालय मन्दिरबाट यात्रा सुरू गरेर चितवनतर्फको वाल्मीकि आश्रम, भारतको जटाशंकर, नरदेवी, लवकुशघाट हुँदै नेपालको रानीनगर, गढीमाई शिवपुर, केउलानीमाई, गजेन्द्र मोक्षधामअन्तर्गतका वैङ्कटेश्वर, लक्ष्मीनारायण र राधाकृष्ण मन्दिरपछि पुनः शिवालय मन्दिर फर्केर पूरा गर्ने पाँच कोस अर्थात् १५ किलोमिटर दूरीको पैदल–चक्रलाई पञ्चकोसी परिक्रमा भनिँदोरहेछ ।
माघेऔँशी, महाशिवरात्रि र हरिबोधनी एकादशीमा कीर्तन गर्दै यी तीर्थस्थलहरुको परिक्रमा गर्न हरेक वर्ष धार्मिक पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दोरहेछ । यी सब सूचना मैले बसभित्रै बटुलिसकेको थिएँ । एकैछिन चक्कर लगाएपछि त्रिवेणीधामको घुमघाम सकियो । त्यसपछि वाल्मीकि आश्रम पुग्ने उपाय खोज्नतिर लागेँ । विशाल समुद्रझैँ फैलिएको कहालीलाग्दो नारायणी नदी पार गर्नु आश्रम पुग्ने सोझो बाटो थियो । त्यो वर्ष असोज लाग्दासम्म बर्सात् भइरहेकाले नारायणी नदीको भेल घटेको थिएन । म दसैँअघि नै गएको थिएँ । तिहारपछिका तीर्थालुहरुलाई नदी वारपार गराउन प्रयोग हुने डुङ्गाहरु पाखामै लडिरहेका थिए ।
त्यहाँबाट सीधै डुङ्गा तर्न नपाए वाल्मीकि आश्रम पुग्न भारतीय भूमि भैँसालोटन हँुदै घुमेर जानुपथ्र्यो । त्यो मार्ग मेरा लागि लामो र झन्झटिलो त छँदैथियो, त्यसमाथि म त्यसबेला हिमाल खबरपत्रिकाको दसैँ अंकका लागि त्रिवेणीधाम र वाल्मीकि आश्रमको दर्शनीय पक्षबारे लेख्ने उद्देश्यका साथ स्थलगत अध्ययन गर्न गएको थिएँ । वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा विवाद जारी रहेकाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बाट आइपर्न सक्ने अनावश्यक उल्झन छल्ने योजना र आफ्नो भूमिमा आफ्नै देशको बाटो भएर पुग्ने चाहनाले मलाई जसरी पनि नदी तर्नैपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना ग¥यो ।
अर्को कुरा, मलाई पत्रिकाका सम्पादकले दिएको समयसीमा भोलिपल्ट सकिँदै थियो । त्यस कारण, मसँग उसैदिन काम सकेर चितवन फर्कने बाहेकको विकल्पबारे सोच्ने ठाउँ नै थिएन । यी परिस्थितिहरुका कारण म जसरी भए पनि नारायणी नदी तारिदिने डुङ्गाचालकको खोजीमा लागेँ । नदीमा पानी नघटेकाले कोही तयार भएनन् । मेरो अनुरोधैपिच्छे आउने प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, ‘यस्तो भेलमा जसलाई दशा लागेको छ, उसले मात्र नारायणी तर्न तम्सिन्छ ।’ जसरी पनि वाल्मीकि आश्रम पुग्ने मह¤वाकांक्षा र खतराको तहबारे अञ्जान भएकाले हुन सक्छ, म चाहिँ एकदम तम्तयार थिएँ । तर, वर्षौंदेखि डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पेसेवरहरु नै हच्किँदा मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो ।
वाल्मीकि आश्रम र त्रिवेणीधामलाई नेपालका पुग्नैपर्ने खास पर्यटन गन्तव्यहरुको सूचीमा सामेल गर्ने योजना धूलिसात् हुन लाग्यो । अब परेन फसाद् ? तैपनि, हिम्मत नहारी मलाई नदी तारिदिने डुङ्गाचालकको खोजीमा हारगुहार जारी नै राखेँ । सौभाग्य भनौँ या दुर्भाग्य, हेर्दा सुरा देखिने एक जना अधबैँसे व्यक्ति मेरो प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए । ती बलवान् नाविकको नाम रहेछ, कृष्णमोहन चौधरी । मागेजति रकम र भरपर्दो साथी पाए आफ्नो ज्यानको जिम्मा आफैँ लिने सर्तमा मलाई नारायणी नदी तारेर वाल्मीकि आश्रमसम्मै पु¥याई फर्काउन उनी तयार भए । मैले उनका सर्तहरु स्वीकारेँ । आफूजस्तै सुरा अर्का साथी खोजेर उनले पाखामा बाँधिराखेको डुङ्गा नदीमा हेले ।
उनीहरु दुई जना डुङ्गाको दुई छेउमा बसेर विशाल सरोवररुपी नारायणी नदीमा वहना खियाउन थाले । म डुङ्गाको बीचमा बसेँ । अलि तल पर्ने गण्डक ब्यारेजको प्रभावले नदीको वेग कम थियो । त्यस कारण, डुङ्गा अनियन्त्रित भई बगाउने डर पटक्कै थिएन, तर गहिरो तलाउमा हेलिँदै गएपछि अर्को आपत्तिले मलाई भयभीत बनायो । फल्याकका टुक्राटुक्रा जोडेर बनाइएको डुङ्गाको चरबाट भुलभुल पानी पसेर डुङ्गा भरिँदै जान थाल्यो । कृष्णमोहनले मलाई किनारमै छँदा एउटा टिनको बट्टा दिएर डुङ्गामा पसेको पानी निकालेर बाहिर फ्याँक्ने जिम्मा दिएका थिए ।
म नारायणीको पानीभन्दा चिसो भएको मुटु लिएर थरथर कामेको हातले पानी उघाउँदै बाहिर फ्याँक्दै गरिरहेँ । डुङ्गा ढलपल भइरहँदा मलाई फनफनी रिँगटा लागिरहेको थियो । वारिपारि कतै नहेरी पल्लो किनारको प्रतीक्षा गरिरहेँ । त्यसबेला डुङ्गा हल्लिएला भनेर सास पनि पूरा फेर्न नसकेको क्षण सम्झँदा अहिले पनि डरले सास रोकिन खोज्छ । त्यसरी डराइरहेका बेला कृष्णमोहनले अघिल्तिरबाट सोधेको एउटा प्रश्नले मेरो सातोपुत्लो उडाएको थियो, ‘डुङ्गा डुब्यो भने तपाईं पौडिएर निस्कन सक्नुहुन्छ ?’ प्रश्न सुन्नासाथ मेरो कान ड्याम्मै थुनिएझैँ भएको थियो । पारि पुगेर नउत्रिँदासम्म मैंले जवाफ सोच्नुको सट्टा प्रश्नै बिर्सने प्रयत्न गरिरहेँ । साँच्चै त्यो परिस्थिति आएको भए पाताल लोकको दर्शन गर्नुसिवाय मसँग कुनै उपाय नै थिएन ।
डुङ्गाबाट उत्रिएपछि म डराएको देखेर दुवै डुङ्गाचालकले मलाई सान्त्वना दिन थाले । मेरो झोला र जुत्तासमेत उनीहरुले नै बोके । मलाई पनि हातमा समातेर डो¥याउँदै नेपाल–भारत सीमामा पर्ने तम्सा खोला र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नेपालतर्फको जङ्गल हुँदै करिब एक घन्टामा वाल्मीकि आश्रम पु¥याए । फटाफट हिँड्दा आधा घन्टाभन्दा बढी नलाग्ने दूरी छ त्यो । आश्रममा पुग्दा म तगडा भइसकेको थिएँ । त्यहाँका अद्भुत रामायणकालीन अवशेषहरुले नारायणी तर्दा ब्यहोरेका संकटहरु सबै बिर्साइदिए । आश्रममा वाल्मीकि ऋषिको तपोस्थल, रामकी पत्नी सीताको वनबासकालीन कुटी र उनले प्रयोग गरेको विश्वास गरिने इनार तथा ढुङ्गाका विभिन्न औजारहरु देख्न पाइयो ।
रामका पुत्रहरु लव र कुशले पढेलेखेको मानिने पाठशाला तथा उनीहरुले गरेका साहसी कामको किम्वदन्ती बोकेका सरसामानहरु पनि देखिए । अनेक कलाकृतिले सिँगारिएका ढुङ्गाहरुका अग्ला खम्बा र पौराणिक किल्लाका भाग्नावशेषहरुले मनमा रहस्यको पठार पैदा गरिदिए । त्यहाँ सीता र हरिहरका दुई छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरु छन् । ती मन्दिरमा उत्खनन् गर्दा फेला परेका प्राचीन मूर्तिहरु समेत मैले देखेँ । सीताले मसला पिस्ने गरेको भनिने पहेँलो रङको लामो र चिल्लो लोहोरोमा अनौठो चमक थियो । रामले अश्वमेध यज्ञपछि छाडेको घोडा उनका छोराहरु लव र कुशले बाँधेको विश्वास गरिने ढुङ्गाको बुट्टेदार किलो अझ आकर्षक लाग्यो ।
तिनै दृश्यहरुमा मग्न हुँदै नोटबुक र कलम निकालेर केहीबेरमा त्यहाँको शब्दचित्र उतारेँ । आश्रमस्थित हरिहर मन्दिरकी वृद्धा पूजारी राजमती गिरी, सीता मन्दिरका पूजारी शेखर सुवेदी, प्रहरी चौकीका हवल्दार सुजन थापा र जङ्गलभित्र २०२६ सालदेखि बस्दै आएका बासिन्दाहरुबाट थप तथ्यहरु टिपोट गरेँ । हरिहर मन्दिरकी पूजारी गिरी २०२१ सालदेखि कार्यरत थिइन् । उनलाई मासिक ७० रूपैयाँ तलब खाने गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले राखेका रहेछन् । २०४२ सालसम्म उनी र उनको श्रीमान्ले त्यही ७० रूपैयाँमै पूजाआजा गर्दै आएका रहेछन् । राजा वीरेन्द्रले त्यो थाहा पाएपछि बढाएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनमार्फत भुक्तानी हुनेगरी एकैचोटि ४५ सय पु¥याइदिएका थिए रे !
२०६० सालमा उमेर हदको कारण राजमतीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनी बिनातलब पूजा गर्दै आएकी थिइन् । २०२६ सालमा तनहुँको रिसिङबाट बसाइँ सरेर आएका मगर समुदायका केही परिवारले आश्रमका भग्नावशेषहरु, लवकुशको इतिहास र त्यहाँ कार्यरत पूजारीहरुलाई दुःख–सुखमा साथ दिइरहेका थिए । म पुग्दाताका वनमा आश्रित भई बसिरहेका ११ परिवारमा एक परिवार गुरूङ र बाँकी मगर थिए । एउटा साझा भट्टीमा पालैपालो रक्सी बनाएर भारतको भैँसालोटन पु¥याई बिक्री गर्नु तथा जङ्गलबाट दाउरा, बाँसका तामा र कुच्चो संकलन गरी भारतीय बजारमा बेच्नु उनीहरुको दिनचर्या थियो ।
त्यहाँ स्कुल जाने उमेरका २० बालबालिका थिए, तर उनीहरुले पढ्ने स्कुल थिएन । रामायणकालीन लवकुशको भन्दा दुष्कर नियति भोग्दै हुर्किइरहेका ती बालबालिकाप्रति न्याय गर्न न महर्षि वाल्मीकि पुनर्जीवित भएका थिए, न त सीता माता नै प्रकट भएकी थिइन् । त्यो दुरवस्थामा वनभित्र बाँचिरहेका जीवनहरुसँग बिदा भएर म तिनै दुई डुङ्गाचालकहरुको साथमा त्रिवेणीधाम फर्किएँ । फर्किने बेला नारायणी नदी तर्दा म उति साह्रो डराइनँ । सायद, वाल्मीकि आश्रमको पुराता¤िवक वैभव देख्न बाँकी रहेकाले मलाई जाँदा जीवनप्रतिको मोह ज्यादा जाग्न गई त्यसैले काँतर बनाएको थियो । फर्कंदा त्यो जिज्ञासा मेटिएकाले म निष्फिक्री नारायणी तरेर त्रिवेणीमा अन्तिम बस भेट्न आइपुगेँ र बर्दघाटबाट बस बदलेर राति अबेर भरतपुरको भूमि टेकेँ ।